မိဖုရား ဖြစ်ချင်သော ကျွန်မ သူငယ်ချင်း သို./(မေစိုး-Shwe Mandalay)
အတူတူ ကျောင်းတက် ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အခု
အချိန်၊ အခု အသက်အရွယ်မှာ အမှတ်တမဲ့ ပြန်ဆုံ တဲ့ အခါ “ဟယ် မတွေ.ရတာ ကြာပြီ "သူငယ်ချင်း
အတော် ၀ လာတယ်နော် ” လို. ပြောတိုင်း “လှတာက ချက်စားလို. မရဘူး ၊ ၀တာက ဖက်ထားလို. ရတယ်လေ
မဟုတ် ဖူးလား” လို. ကိုယ့်ကိုယ့် ကိုယ် ဖြေသိမ့်တဲ့
အတွေးတွေ နဲ့ ရယ်ရယ် မောမော ပြန်ပြော ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုးငယ်ငယ်က ခင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက
အခုချိန် ပြန်တွေ.ရင် ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ် ကို ၀တယ် လို. ပြောကြတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ တကယ်တော့
အသက် (၃၅-၄၀ ) ၀န်းကျင် ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ် ကိုတော့ လူလတ်ပိုင်း လို.ပြောကြတဲ့ အရွယ်ပေါ့။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း မြတ်ဆိုသူ ကတော့ ကျွန်မကို တွေ.တိုင်း ၀တယ်လို.
သတိပေးမြဲ ။ သူကတော့ ဘယ်လောက်စားစား မ၀တဲ့ သူကိုး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မက သူ.ကို ကိုယ်သူခိုး
လို. ခေါ်တာပေါ့။ မြတ်ကတော့ သူ့ body weight ကို အမြဲ ထိန်းနိုင်သူ တစ်ယောက်မို.လို.
အချိုးအဆစ် ပြေပြစ် သွယ်လျှတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေးဟာ ဘယ်လို ၀တ်စားထားထား ကြည့်လှ နေလေရဲ့။
ခုတော့ ကျွန်မ ကို သူငယ်ချင်း မြတ်က နားချလေပြီ၊ အကြောင်းအရင်းက
ကျွန်မ အသက် ၄၀ နားနီးလာပြီး တုတ်တုတ် ခိုင်ခိုင် ဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်မ လက်မောင်း၊ ဖောင်းဖုနေတဲ့
ကျွန်မရဲ့ ဂုတ်ပြင်တွေ၊ ကိုယ်ဝန် အနည်းဆုံး နှစ်လလောက် ရှိမယ်လို. ထင်ရလောက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့
၀မ်း ဗိုက်နဲ့၊ ရုပ်ဆိုးစ ပြုလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ ဟိုးငယ်ငယ်ကနဲ့
မတူတော့တဲ့ ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းက ဆိုလာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရယ်
ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာမှ မလိမ်းမခြယ် ပဲနေတာ ငယ်ဂုဏ်လေး ရှိတော့ လှပေတာပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျပြီး
သွားတဲ့အခါ တစ်ချို.သော အမျိုးသမီး တွေဟာ “ငါ့ ဘ၀ရဲ. အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု
ပြီးဆုံးသွားပြီ ထင်ပြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပြုမပြင်ပဲ နေတော့ ကိုယ့် ယောကျာ်းက စိတ်ကုန်ပြီး
သိပ်ချစ်ဖို.ကောင်းတဲ့ ငယ်ငယ်ချောချော ကြင်ယာတော် လေးတွေ ရှာတတ်ကြ တယ်တဲ့။ ခု တို.တစ်တွေ
အသက် ၄၀ အရွယ်နား ရောက်လာပြီ ဆိုတော့ စတိုင်ကျကျ တင့်တင့်တယ်တယ် ကြည့်ကောင်းဖို. မျက်နှာမှာ
အရေး အကြောင်းတွေ အတွက် Skin Care လုပ်ဖို.လိုလာပြီ ။Body Weight ကိုလည်း ထိန်းသင့်တယ်
ကလည်း မြတ်ရယ် နင်ပြောတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ခုခေတ်ကြီးကလည်း အလှပြင် ပစ္စည်းတွေ၊ တံဆိပ်တွေက
မိုလို ပေါက်နေတာ။ ပြီးတော့ နင်ပြောတဲ့ skin care လုပ်ဖို. ဆိုတာက Set လိုက် အများကြီး
၀ယ်သုံးရတယ်။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် ကလည်း အများကြီးရယ်။ ဘာလေးကောင်း နိုးနိုး နဲ့
ဘယ်လို လိမ်းရမှန်းတောင် မသိပါဘူး ဆိုတော့ မြတ်က အလှအပ ၀ါသနာပါသူ ပီပီ စပြီး (lecture)
လက်ချာတွေ ပေးပါတော့တယ်။ Skin Care အတွက် ဆိုရင် မနက် ရေချိုးတဲ့ အခါ မျက်နှာကို Facial
Foam (သို့မဟုတ်) Cleanser နဲ့ သစ်ရမယ်။ ဒါမှ မျက်နှာပြင် ပေါ် မှာရှိ နေတဲ့ ဆဲလ် အသေနဲ့
အညစ် အကြေး များကို Cleanser က ထိထိ ရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးရုံ သာမကဘဲ ဆဲလ် အသစ်တွေ
ကို ထပ်မံ တိုးပွား စေတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ Toner လေးကိုလည်း လိမ်းပေးရမယ်။ Toner က အသား
အရေကို ကြည်စေပြီး ချွေးပေါက် ကျဉ်းစေ တယ်။ ပြီးတော့ အရေပြားရဲ့ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်း ပေးနိုင်တဲ့
“မွိုင်ချာရိုင်ဇာ” (Moisturizer) တစ်မျိုး ကိုလည်း လိမ်းပေး ရဦးမယ်တဲ့။ အပြင်ထွက်တဲ့ အခါ နေ့ခင်း ဘက်မှာ လိမ်းဖို့ ကတော့ နေရောင်ကာ ဓာတ်ပါတဲ့ UV ပါဝင်တဲ့ Day Cream ကို နေ့စဉ် သုံးစွဲ သင့်တယ်ေ
ပါ့လေ။ ဒါမှ မျက်နှာမှာ အမည်းစက်တွေ၊ မှဲ.ခြောက်တွေ၊ တင်းတိတ်တွေ မကျ စေအောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်သတဲ့။နောက်ပြီး ကျွန်မတို.လို အရွယ်
အသက် ၄၀ လောက် ကစပြီး မျက်ဝန်း အတွက် သီးသန့်
ဖော်စပ်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းဆေး Eye Cream ကို စတင် လိမ်း သင့်ပါတယ်။ နောက် လည်ပင်း အတွက်
Neck Creamကို လိမ်းပေးပြီး ခြေလက်တို့ကိုတော့ Body Lotion ကို မှန်မှန် လိမ်းသင့်ပါတယ်ပေါ့။
ညနေဘက်မှာတော့ တစ်နေ့လုံး လိမ်းခြယ် ထားတာတွေကို ဖယ်ရှား သန့်စင်နိုင်ဖို. အတွက်
Cleansing Cream လိမ်းပြီး ပြန်ဖျက်ရမယ်တဲ့လေ။ ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီး အချိန်မှာ ရေချိုး
သန့်စင်ပြီးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ် အိပ်စက် အနားယူခြင်း မပြုမီမှာ Night
Cream ကို ညစဉ် မှန်မှန် လိမ်းရဦးမတဲ့လေ။ ဒီလို သုံးစွဲပုံ အဆင့်ဆင့်ကို နေ့စဉ် ပုံမှန်ပြုလုပ်
သွားမှ Skin Carer အတွက် ပိုကောင်းတယ်တဲ့ ဆိုပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြရှာပါတယ်။
ကတော့ Skin Care လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကလည်း လိမ်းလိုက် ၊ခြယ်လိုက်၊ ဖျက်လိုက်နဲ့ တင်ပဲ
တစ်နေ.တာ တော်တော် အလုပ်လိုက် ရူပ်လိုက်ပုံများ လို. ပြောမိပါတယ်။ မြတ်က အလှအပ ၀ါသနာ
ပါ ရုံသာမက လှလှပပ ကြွ ကြွ လေး နေတတ်တာပဲလေ။ မှန်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမသား တိုင်း ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ အိမ်ထောင်ရေး
သာယာချမ်းမြေ့မူ.နဲ့ ခိုင်မြဲခြင်းပါပဲ။ ခိုင်မြဲ အေးချမ်းတဲ့ မိသားစု ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်
ချင်ကြပေမဲ့ မိန်းမသားတွေရဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအား ထုတ် မူ.တွေ က မတူ ညီကြ ပါဘူး။ မြတ်ရဲ့
အယူအဆက ကတော့ ယောက်ျား အများစု ဟာ ချောမောပြီး ဆွဲဆောင်မှု.ရှိသော မိန်းမ၊ သစ်လွင်ပြီး
ငယ်ရွယ် နုပျိုသော မိန်းမတို့ကိုသာ နှစ်သက် စွဲလန်း တတ်တယ်။ လိုချင်ကြတယ်။ မက်မော တန်ဖိုးထား
ကြတယ်ပေါ့။ သူမ အိမ်ထောင်ရေး အတွက် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမ အလိုအတိုင်း အမြဲ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ဖို.
အမြဲ ကျင့်ကြံ အားထုတ် နေပါသတဲ့ လေ။ဒါမှ ကိုယ့်ယောင်္ကျားနဲ့ လိုက်ဖက်မဲ့ အိမ်ထောင် ရှင်မိန်းမ
သာမက ပွဲတက် မယား လို.ခေါ်တဲ့ မိဖုရားရော၊ ကြင်ယာတော်ရော ဖြစ်မတဲ့လေ။ (ဟိုးယခင်
ခေတ်က ဘုရင်တွေမှာ ပွဲတက် မိဖုရား ဆိုတာလည်း ရှိ်သလို၊ သူတို. မှာ သိပ်ချစ် စရာကောင်းတဲ့
ကြင်ယာတော် ဆိုတာလည်း ရှိသတဲ့။ ဘာကြောင့်များ မိန်းမတွေကို ဒီလို ခေါင်းစဉ် ခွဲပြီး
သတ်မှတ် ရတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မ သေချာ နားမလည် တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကဲ ဒါ ထားလိုက် ပါတော့လေ။
) ကျွန်မကတော့ မြတ်နဲ့ ခံယူချက်ခြင်းတော့ အနည်းငယ် ကွဲပြားပါတယ်။ မိမိ
တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင် - တိမ်းမသွား ယိမ်းမသွား စေဖို. မိမိရဲ့ လင်ယောကျာ်း အပေါ်မှာ
အလွန်အမင်း ငွေကုန်ကြေးကျခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီး အားထုတ် နေကြတဲ့ မိန်းမသား တစ်ချို.ရဲ့
ဒုက္ခဟာ သနားစရာပါပဲလို.တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့က သူတို့တွေရဲ့ အရွေးချယ်ခံ ဘ၀ကိုရောက်ဖို့
ဆွဲဆောင်မှု. ရှိအောင်၊ လှပအောင်၊ နုပျိုအောင် ကြိုးစားကြရမှာ တဲ့လား။ နေပါစေတော့။ အခုတော့
အရွယ်က လွန်ပြီး အိမ်ရှင်မ လည်း ဖြစ်နေလေတော့ ဒီစကားမျိုး ပြောပြီပေါ့ လို.တော့ မပြုံးမရီ
စေချင်ပါဘူး။ အလှအပ ဆိုတာကလည်း မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း မြတ်ကတော့ အလှအပ ၀ါသနာလည်း ပါ ၊ သူ.စိတ်ကူးက သူ.ဘ၀ လက်တွဲဖော် အတွက် မိဖုရား
ရော၊ ကြင်ရာတော် ဖြစ်ချင်တဲ့ သူ။ ဆိုတော့ လည်း သူသုံးနေ တဲ့ အလှကုန်တွေ ကို ကျွန်မ
ကြည့်ပြီး အလှအပ အတွက် ကုန်လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံ၊ ရူပ်လိုက်တဲ့ အလုပ် ၊လို.တော့ ပြောမိတယ်။
မြတ်ကတော့ ဒီလိုမှ မသုံးရင် အသားအရည်ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်း မလဲပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ကိုယ်လုံးအလှ
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လည်း လုပ်ရမတဲ့လေ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် အလှ မပျက်အောင် ဂရုစိုက်နေ ရမတဲ့
၊သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကို သူမ အလိုအတိုင်း အမြဲ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ဖို. အမြဲ ကျင့်ကြံ အားထုတ်
နေပါသတဲ့ လေ။ သူ.အတွေးနဲ့ သူ့လုပ် ရပ်ကတော့ ဟုတ်နေသလိုပေါ့။
ကျွန်မတို. တစ်တွေဟာ မိမိ
ခန္ဓာကိုယ် ကိုတောင် မိမိမပိုင်ဆိုင်နိုင်တာ အစိုးမရနိုင်တာ တစ်ခြားသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်အပေါ်မှာ
ပိုင်ဆိုင်ဖို.၊ အစိုးရနိုင်ပါ့မလား။ မိန်းမဘ၀ရဲ့ အဆုံးစွန်သော အားထုတ်လုပ်ဆောင်ချက်က
ယောကျာ်း တွေအတွက်ဆို တာပဲလား။ တစ်ခြား ဘာမှ အဖိုး တန်တဲ့ အလုပ်မလုပ်နိုင် တော့ဘူးလား
လို့တောင် ကျွန်မတွေး မိပါတယ်။
အလှ အပဆိုတာ ကလည်း လူ.သတ်မှတ် ချက်မဟုတ်လား၊ လူ သတ်မှတ် ချက်ဆိုတာကလည်း
ခေတ်နဲ့ အညီပြောင်းလဲ နေတာ လေ။ ဒီ ပြောင်းလဲ နေတဲ့အရာ ကြီးကို ကိုယ်က ခေတ်နဲ့ ညီအောင်
ဆိုပြီး လိုက်လုပ် နေလို. မဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ ကျွန်မတို.ဟာ သဘာဝ တရားအရ အိုမင်း ခြင်း
ဇရာ ဆိုတာကို ဘယ်မိတ်ကပ်တွေ ဘယ်ကော့စမက်တစ်တွေ နဲ့မှ ဖုံးဖိ မထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်
ကျွန်မသူငယ်ချင်း တွေးထင်သလို ငယ်ရွယ် နုပျိုသော မိန်းမတို့ကိုသာ နှစ်သက် မက်မော စွဲလန်း
တတ်တယ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသား တွေ ကိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီ တက်မက် စွဲလန်းဖွယ် ဖြစ်တဲ့
ငယ်ရွယ် နုပျိုသော မိန်းမ ဆိုတာလည်း တစ်ချိန်ကျ အိုသွား မှာပါပဲ။ အရင် အသက်ကြီး ပြီး
အိုသွားတာနဲ့ နောက်မှ အသက်ကြီးပြီး အိုသွားတာ ပဲ ကွာတာမို. ဘာမှ မဆန်းကြယ် လှပါဘူး။
လူဆိုတာ အရွယ်က စကား ပြောတယ် ဆိုတာ ရှိလေတော့ သူ့အရွယ်နဲ့ သူ၊ အသိဥာဏ် ပညာရင်.ကျက်
လာပြီး သူ့အလှလေးနဲ့သူ တင့်တန်း လန်းဆန်း ကျန်းမာ နေဖို.ရာ အဓိကပါပဲ။ အရွယ်ကြီး လာတာနဲ့
အမျှ အသိဥာဏ်၊ ပညာလည်း ကြီးလာမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ သူငယ်ချင်း မြတ်ပြောခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေ ဟာ ယောကျာ်းတွေ အတွက်
ပွဲတက်မယား ကော၊ ကြင်ယာတော် ကော တစ်ဦးတည်း ဖြစ်ချင်တာ၊ တွေထက် ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ကျင့်
တရားကေင်းမွန်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့၊ အထင် ကြီး၊လေးစား ရတဲ့ ဘုရင် အတွက် ဆိုရင်တော့
မိဖုရား ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘုရင်မပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။
တကယ်တမ်းစဉ်းစားရင် အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တစ်ဦး
တစ်ဦး သဘာဝ ကျကျနဲ့ သစ္စာရှိရှိ ဖြတ်သန်း ကြမယ် ဆိုရင် ဘာစိတ်ဆင်း ရဲမှု.မှ ကြုံလာစရာ
အကြောင်း မရှိနိုင် ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြုပြင် ဖန်တီးရုံက လွဲပြီး အပေါ်ယံ ဘာနဲ့မှ
ပြုပြင် ဖန်တီးလို့ မရပါဘူး။ ဆိုတဲ့ ကျွန်မ အမြင်လေးကို စာဖတ်သူနဲ့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း
မြတ် သို. ဒီစာလေးနဲ့ ပြည်လည် ပြောပြလိုက် ပါတယ်။ ရေးသားသူ- မေစိုး (Shwe Mandalay)
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရင်ခုန်သံ (ရေးသားသူ-မေစိုး (ရွှေမန္တလေး) ၅-၁-၂၀၁၃
ဒီတပတ် စနေနေ. မှာတော့ ကျွန်မ အမျိုးသားရယ် ၊ ကျွန်မရယ်၊ကျွန်မ ရဲ့ ဆရာသမား
ဖြစ်တဲ့ Uncle ဦးသန်းအောင်နဲ့ အတူ Pizza Htut မှာ ညနေစာ အတူ စားကြတယ်။ Uncle ဦးသန်းအောင်က
မြန်မာ ပြည်မှာ နေစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံသား များ ဘဏ်ရဲ့ (MD) ပါ။ ခုတော့ အနားယူလိုက်ပါပြီ။
စင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ သူ.သမီးတွေ မြေးတွေရှိရာ စင်္ကာပူုကို တော့ ခဏခဏ လာတတ်ပါတယ်။ Uncle
ကြီး မြန်မာပြည် မပြန်ခင်လေးမှာ ကျွန်မတို. နဲ့ တွေ.ဆုံခဲ့ကြတာပါ ။ စားသောက်ဆိုင် ထဲ
၀င်ထိုင်ပြီး အစားအသောက် တွေ မှာ နေချိန်မှာ တော့ ကျွန်မတို. နဲ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်
မှာ ထိုင်တဲ့ စားပွဲ တစ်ခုဆီကို ကျွန်မ အကြည့်တွေ ရောက်သွား ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ စားပွဲမှာ
ချစ်သူ ရည်းစား နှစ်ယောက်ထိုင်ပြိး ကြည်နူးစွာ စားသောက် နေကြပါတယ်။ ထူးခြားတာက အမျိုးသားက
အသား မည်းမည်း အာဖရိကန် လူမျိုးပါ။ အာဖရိကန်
ဆိုတော့ အသား ကလည်း ခပ်မည်းမည်းပေါ့။ ဆံပင်တွေကလည်း ခြောက်သွေ.ပြီး ကောက်ကွေး နေတဲ့
ကြားက ကျစ်ဆံမီး ချောင်းတွေက ကျစ်ထား လိုက်သေးတာ။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစားကတော့ ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းပါ
။ အရပ်ကလည်း ရှည်ပါတယ်။ သူနဲ့ တစ်စားပွဲတည်းမှာ အတူထိုင်စားနေတဲ့ အမျိုး သမီးလေးကတော့
တရုတ်မလေး ၊ အသားမှ ဖြူဖွေး စွတ်နေတာပဲ။ အရပ်က ပုတုတု နဲ့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစားကလည်း
ကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ မတူညီခြင်းတွေက အများကြီးပါ။ အသားအရာင် ကလည်း အမဲ နဲ့ အဖြူ၊ အရပ်ကျတော့လည်း
အပု၊ နဲ့ အရှည် ၊ လူမျိုးကလည်း မတူ၊ ဘာသာလည်း မတူကြပါဘူး။ ဒီမတူ ညီချင်းတွေ အများ မှာ
သူတို. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အတူနေထိုင် စားသောက်ပြီး ပျော်ရွင်နေကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ
လို. ဆိုတာတော့ ထွေထွေ ထူးထူး စဉ်းစား နေစရာ မလိုပါဘူး ။ သူတို. နှစ်ဦး စလုံးမှာ တူညီတဲ့
ချစ်ခြင်းတွေ ရှိနေကြလို.ပါပဲ။ သူတို. နှစ်ဦး အတွက်က ပြင်ပ ရုပ်ဝတ္တု အားဖြင့် မတူညီ ကြပေမဲ့
သူတို.နှစ်ဦးမှာ တူညီနေတာ တစ်ခုရှိကို ရှိပါတယ်။ မတူညီတဲ့ အရာတွေ အများကြီးထဲမှာမှ တူညီနေတဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့
သူတို. ဘ၀ကို ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်း နေကြတာပါ။ တနည်းပြန်တွေးကြည့်ရင် ချစ်ခြင်း ဆိုတဲ့
အရာက မတူညီတာတွေ အားလုံး ကို တူညီ သွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ပက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေဖြစ်တဲ့ အမည်နာမ
တွေကို ဖြုတ်၊ တပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ ကိုခွာချလိုက်ပြီး ၊ လူသားတွေ အချင်းချင်း
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သန်.ရှင်းတဲ့ ချစ်ခြင်း၊ ခိုင်မာတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ မေတ္တာအိမ်
လေးတွေ တည်ဆောက် နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရင်ခုန်သံလေးတွေ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးမှာ
ပျံလွင့်လို. သွားမှာပဲလို. ကျွန်မ ယုံကြည်နေမိတယ်။ မှ/ မေစိုး ( ရွှေမန္တလေး) (၅-၁-၂၀၁၃) ဆက်ဖတ်ရန်>>>
အချစ် နဲ. အ ချိန် ။ ရေးသားသူ-မေစိုး (ရွှေမန္တလေး) သဇင် မဂ္ဂဇင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ...
ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်လေးပါ။ ဟိုး ရှေးရှေး
တုံးက အချစ် အပါအ၀င် ပျော်ရွင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်း
ခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ ဘ၀မြင့်ခြင်း၊ အသိပညာ စတဲ့ စိတ်ခံစားချက် နဲ့ အာရုံ တွေ
ဟာ ကျွန်းငယ် လေး တစ်ကျွန်း ဆီကို ခရီးထွက် လာခဲ့ကြတယ်။ သူတို. အားလုံး အဲဒီ ကျွန်းလေး
ပေါ်မှာ ရောက်နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ မုန်တိုင်း
သတိပေး ကြေငြာချက် တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် အားလုံး အထိပ်တလန်.ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ ဒီကျွန်းလေးကနေ
မုန်တိုင်း မကျခင် အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာဖို. ကြိုတင်
ပြင်ဆင် ကြရပါတော့ တယ်။ အချစ်က လွဲပြီး ကျန်တဲ့
သူ အားလုံးက လှေငယ်လေး တွေ အမြန် တည် ဆောက် ကြပါတယ်။ အချစ် ကတော့ စွဲလန်း နှစ်သက်ဖွယ်
ကောင်းတဲ့ ဒီကျွန်း ကလေးကို တွေ.ပြီး မခွဲနိုင် မခွာရက် ဖြစ်နေ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ သူ ကြံကြံခံ ဖို.မျော်လင့် ထားသူပေါ့။ ကောင်းကင်ကြီး တစ်ခုလုံး နီရဲလို.လာပါပြီ။ တိမ်ဆိုင်တိမ်လိပ် တွေဟာ တစ်လိပ်ပြီး တစ်လိပ် ဒီကျွန်းလေး
ဆီကို အပြေး ရောက်လို. လာလို.နေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ အချစ်ဟာ ဒီကျွန်းလေးကို ထားပြီး
ထွက်ခွာ ရတော့မယ် လို. သူဆုံး ဖြတ်ချက် ချလိုက် ပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ အချစ် တစ်ယောက် တည်း လှေတစ်စီး မဟုတ်တစ်စီးနဲ့ ဘေးကင်းရာကို လိုက်ပါ
သွားနိုင်ဖို. အတွက် ကူညီမဲ့ သူကို လိုက်လို. ရှာနေမိတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ
အချစ်နားကနေ “ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်း” ဟာ လှေလေး
တစီးနဲ့ ဖြတ်သွား ပါတယ်။ အချစ်က “ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်း” ရဲ့ လှေလေးနဲ့ အတူ အချစ် ဘေးကင်းတဲ့
နေရာကို လိုက်ပါရစေ။ အချစ်ကို ကူညီပါ ”လို.လည်း ဆိုရော။ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းက အချစ်ရေ ကိုယ့်လှေ ပေါ်မှာ ရွှေ တွေ ၊ ငွေတွေ ၊အဖိုးတန်
ကျောက်မျက် ရတနာတွေ နဲ့ ပြည့် နှက်နေတာ ။ အချစ်အတွက် နေရာ မပေး နိုင်ပါဘူးကွာ။ အဲဒီ
အတွက်တော့ ၀မ်းနည်း ပါတယ် ဆိုပြီး ခရီးဆက်လို. သွားခဲ့တယ်။ နောက် လှေလေး
တစ်စီးမှာတော့ “ဘ၀င်မြင့်ခြင်း၊” ကို လှမ်း မြင်လိုက်ပါတယ်။ သူ.ကလှေ လေးကို အထက်တန်း ကျကျ ပြင်ဆင် ထားလိုက်တာ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကူအညီတော့ တောင်းကြည့် လိုက်မိတယ်
ဆိုပြီး “ အချစ်ကို ကူညီပါ၊ မိုးတွေ
လေတွေနဲ့ မုန်တိုင်းထန်လု နီးနီး ဖြစ်နေပြီ၊ ”လည်း ဆိုရော။ ဘ၀င်မြင့် ခြင်းကလည်း အချစ်ကို တစ်ချက် ကြည့်ပြီး မင်းတစ်ကိုယ် လုံး စိုရွဲ ပေပွ နေတာ ၊ လှပတဲ့ တို.
ရဲ လှေလေးပေါ်မှာ မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့၊ တို.လှေပေါ်မှာ အလှဆင်ထား တဲ့ အရာတွေ အားလုံး မင်းကြောင့် ပျက်စီး ကုန်ပါ့မယ် ဆိုပြီး ရှေ.ဆက်
လို. သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်လှေ လေး
တစ်စီးပေါ်မှာတော့ “၀မ်းနည်းခြင်း” ဟာ အချစ်အနား ရောက်လို. လာပါတယ်။ သူနဲ့ အတူလိုက်ဖို.
အချစ် ခွင့်တောင်း ကြည့်ရမယ် ဆိုပြီး။ “၀မ်းနည်းခြင်းရေ
မင်းရဲ့လှေလေးနဲ့ အချစ်လိုက်ခဲ့ပါရစေ။ ”လို.ဆိုတော့ ။ ကိုယ်မှာ မုန်းတိုင်းကြောင့်
သိပ်ဝမ်းနည်း နေတယ်။ နာကျင်မူ. တွေ သောကတွေ နဲ့လည်း ပြည့်နှက်နေ လို. ကိုယ် တစ်ယောက်တည်း
ပဲ သွားပါရစေ၊ မင်းကို မကူညီ နိုင်တာ ခွင့်လွတ်ပါတဲ့။
ရဲ့ နောက်မှာ ကတော့ “ပျော်ရွင်ခြင်းရဲ့ ”လှေလေးပေါ့။ အချစ်က အကူ အညီတောင်းပေမဲ့ သူဟာ ပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းကြားကနေ ပျော်ပျော်ကြီး
လွတ်မြှေက် နိုင်ဖို. အာရုံ တစ်ခုတည်း ရှိနေတာကြောင့် အချစ်ရဲ့ခေါ်သံကို တောင် မကြားလိုက်နိုင်ပဲ အချစ်နားက ရွင်ရွင်ပျပျ ရွက်လွင့် လို. သွားခဲ့ပါတယ်။
မှာ လေတွေ တိုက် ၊ မိုးတွေရွာ နဲ့ ကျွန်းလေးလည်း
မကြာခင် နစ်မြုတ်ေ တာ့မယ်။ အချစ်လည်း ဒီကျွန်းလေး နဲ့အတူ နှစ်မြုတ်သွားတော့ မှာပါ လား
ဆိုပြီး စိတ်ပျက် လက်ပျက်နဲ့ အားအင်တွေ ကုန်ခမ်းပြီး
လက်မိုင်ချ တွေ ဝေနေဆဲမှာ ရုတ်တ ရက် အသံ တစ်သံကို ကြား လိုက်ရ ပါ တယ်။ "လာ အချစ်
မင်းကို တို.ခေါ်သွားမယ်” ဆိုပြီး အချစ်ဆီ ကို လှေလေး တစ်စီး ဆိုက် ကပ်လို. လာပါတယ်။
အချစ်က ဘာကိုမှ တွေးမနေ တော့ပဲ လှေလေးပေါ်ကို အမြန် ခုန်တက် လိုက်ပါတော့တယ်။ အချစ် ဟာ အဲဒီလှေလေး
ပေါ်မှာ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ လှေလေးပေါ်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ တွေ ပါတယ်။ ဘယ်သွားကြ မလဲဆိုတာကို
မေး ဖို.ထက် လောလော ဆယ်တော့ အချစ် အတွက် အသက် ချမ်းသာ ရာ ရသွားပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးနဲ့ အချစ် အရမ်းပျော်သွား မိတယ်။ အချစ် လိုက် ပါခဲ့ တဲ့ လှေ ကလေးဟာ အချစ်အတွက် လုံခြုံ
စိတ်ချ ရတဲ့နေရာ ကို အရောက် သွားနေမှန်း သိလိုက် တော့ စိတ်ကို ဒုံးဒုံး ချလိုက်တဲ့
အခါ တခဏ မှေးဆက် အိပ်ပျော် သွားခဲ့ပါတယ်။ စူးရှ တောက်ပတဲ့
နေရောင်ခြည် ရဲ့ အလင်းကြောင့် အချစ် မှေးစက် အိပ်ပျော်နေရာက နိူးလာပါ တယ်။ အချစ် လိုက်ပါလာတဲ့
လှေလေး ဟာလည်း သာယာလှပ တဲ့ ကျွန်းလေးပေါ်ကို ဆိုက်ရောက် လို.နေပါပြီ။ လှေပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ သူတွေ
ထဲက တစ်ဦးကတော့ “တို. သွားပြီ နော် အချစ်
လို. ပြောကာ နုတ်ဆက်ပြီး အချစ်အနားက ကျောခိုင်း
ထွက် ခွာသွားပါ တော့တယ်။ ဒါနဲ ဒီလှေလေးထဲမှာ ကျန်ရှိနေ သေးတဲ့ အသိပညာရှိခြင်း ကို အချစ်က
မေး တော့တာပေါ့။ အချစ်ကို စေတနာ ထက်သန်စွာနဲ့ ကယ်တင်ပြီုး ထွက်ခွာ သွားတဲ့ ဒီလှေပိုင်ရှင်
က ဘယ်သူလဲ လို. သိပါရစေ လို. ဆိုတော့၊ အသိပညာက “အချိန်” ပါပဲလို. ပြန်ဖြေ လိုက်ပါတယ်။ အချိန်က ဘာဖြစ်လို့ အချစ်ကို ကူညီရတာလဲ" လို.
အချစ်က မေးပြန်တယ်။ အသိပညာက နက်နဲ တဲ့ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြုံးရင်း ဖြေလိုက်ပါတယ် "အချိန်က
အချစ်ရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်လို့ပဲ တဲ့လေ” ပုံပြင်လေးကတော့
ကို ဖတ်ပြီး တဲ့အခါ မှာတော့ ကျွန်မ အချစ်ရဲ့ တန်ဖိုး ဆိုတာ ကို ကျွန်မ ရော နားလည် သလား
ဆိုတာ စဉ်းစား တွေးတော မိပါတော့တယ်။ ကျွန်မတို. အားလုံး အချစ် ကို မေ့မထားသင့်ဘူး၊
စည်းစိမ် ဥစ္စာ ပစ္စည်း ချမ်းသာ မူ.ကြောင့်လည်း အချစ်ကို မေ့မထား သင့်ပါဘူး။ ဂုဏ်တွေ ပကာသန၊ မာန်မာန
တွေ ကြောင့်လည်း အချစ်ကို စွန်.ခွာပြီး၊ ပစ်ပယ် မထားသင့်ပါဘူး။ ပျော်ရွင်ခြင်းကြောင့်လည်း
အချစ်ကို လစ်လျှုရူ မထားသင့်ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းခြင်း ကြောင့်လည်း အချစ်ကို မေ့ မပစ်သင့်ပါဘူး။ အချစ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည် သင့်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ
လူသားတွေရဲ့ ဘ၀မှာ တကယ် မရှိ မဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ် ၊ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုတော့
လူတိုင်း ပြောဖူး ကြမှာပါ။ ဟိုးငယ်ငယ် လူမှန်းသိတတ် စ အရွယ် လောက် ကတည်းက ချစ်တယ် ဆိုတဲ့
ဒီစကားလေးကို လူတိုင်း ပြောခဲ့ ဖူးကြမှာပါ။ လူမှန်းသိတတ်တဲ့ ကလေး ဘ၀ အရွယ် မှာ မိဘတွေ
က သားသမီးကို မေးခဲ့ ဘူးတဲ့ မေးခွန်း လေးပါ။ “ဖေဖေ နဲ့ မေမေ နှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူကို ပိုချစ်လဲလို.
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ အဲဒီမေးခွန်းကို ဖေဖေ က မေမေကွယ်ရာ မှာ မေးရင်
ဒီမေးခွန်းဟာ သိပ်ဖြေလို. လွယ်တာပေါ့ ။ ဖေဖေကို ပိုချစ်တယ် လို. ပြောလိုက်တာပေါ့။ ဖေဖေက သူ.ကို ပိုချစ်တယ် ပြောတော့ သမီးစကား ကြားရတာ ဖေကြီး အပြင်မှာ ငွေရှာရတာ ဘယ်လောက် မောမော အမောတာတွေ ပြေသွားတာပဲတဲ့လေ။ မေမေ ကလည်း ဒီလို မေးခွန်းမျိုး ဖေဖေ ကွယ်ရာမှာ
မေးတတ် သေးတယ်။ ဖေဖေ ကွယ်ရာမှာမို. မေမေကို ပိုချစ်တယ် လို. ပြောရင် မေမေ က သဘောကျပြီး
ပြုံးနေတာပဲ။ ( ဖေဖေနဲ့ မေမေ စကား လက်ဆုံ ကျတဲ့ တစ်နေ.တော့ ကြွားကြ ပါလေရော၊ သမီးက
သူ.ကို ပိုချစ်တယ် ၊ ကိုယ့်ကို ပိုချစ်တယ် ဆိုပြီးတော့လေ။) သမီးက ဖေကြီး ကို ပိုချစ်တာလို.
ပြောတယ် မေကြီးရေ၊ ဆိုလေတော့ မေမေ ကလည်း ဘယ်ခံနိုင်လိမ့် မတုံး “ကျွန်မက ၀မ်းနဲ့လွယ်
မွေးထား ရတာပါ။ ကျွန်မက သမီးနားမှာ အမြဲ အချိန်ပေး ဂရုစိုက်လို. ကျွန်မကို ပို ပိုချစ်တာပါတော်။
မယုံရင် မေးကြည့် ၊ သမီး ဘယ်သူကို ပိုချစ် လဲ ဖြေလိုက်စမ်း လို.” မေမေက အားနဲ့ မာန်
နဲ့ ပြောတဲ့ အခါ ကျွန်မ နှစ်ယောက်လုံးရှေ. ဘယ်သူကို ပိုချစ်တယ် ပြောရပါ့ ။ နှစ်ယောက်လုံးကို
ချစ်တာပါပဲလို. ဖြေလိုက်ရတောတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကို ပိုချစ်လဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့ ရှာဖို. ခက်ခဲ သွားတော့ အမှန်ပါပဲ။ ငယ်ငယ် တုံးဆိုတော့ ဖေဖေ နဲ့ မေမေ (မိဘ) နှစ်ပါး
ပဲရှိ သေးတာနော်။ နောက် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ညီအကို မောင်နှမ
၊ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်း ၊ ချစ်သူ၊ အစရှိတဲ့ သူတွေ ကိုချစ်တဲ့ အချစ်ဟာ မရှိမဖြစ် ဘ၀မှာ
အရေးပါ လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အချစ်မရှိရင် ဘ၀ အဓိပ္ပါယ်လည်း မရှိတော့သလိုပါပဲ။ ဘ၀ထဲမှာ
အသက် ရှင်နေရတဲ့ အခိုက် တော့ အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲ၊ နှလုံးသား ထဲက လိုလား တောင့်တတဲ့ ခံစားချက်
လေးပါပဲ။ လူတိုင်းမှာ ဘာအရောင်မှ
မခြယ်ထားပဲ အချစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နှလုံးသား အိမ်လေး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ နှလုံးအိမ်လေးထဲမှာ
ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု လေးတစ်ခု ရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်။ ချစ်သူလည်း ရှိတယ်။ ပန်းလေးတွေ ၊ တေးသီချင်းလေးတွေ၊
ငှက်ကလေးတွေ၊ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ အစရှိသဖြင့် ကျွန်မတို. ချစ်ရတဲ့ သူ သက်ရှိ / သက်မဲ့ အရာ
အားလုံးကို ထာဝရ သိမ်းဆည်း ပေးထားပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ
အချစ်ကိုယ်ဆီ ရှိသလို အချိန် ကိုယ်ဆီ လည်း ပိုင်ဆိုင်ထား ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို.မှာ ရှိနေတဲ့
အချိန်တွေကို နေ.စဉ် ဘ၀မှာ လည်း အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်
ဖို.အတွက် အလုပ်လုပ်ကြ ရပြန်တယ်။ ခုခေတ်ကြီးက လည်း ကျွန်မ အပါအ၀င် ဘယ်သူကိုပဲ ကြည့်
ကြည့် အလုပ်တွေ များနေ တတ် ကြပါတယ်။ အားနေရင်တောင် ဖုန်း တစ်လုံး နဲ့ အလုပ်ရူပ်နေတတ်
ကြတယ်။ အလုပ်ထောင်ချေက် ထဲမှာ ပိတ်မိ နေတတ် ကြပါတယ်။ မေးလိုက်ရင်လည်း သူသူ ကိုယ်ကိုယ်
အားတယ်ရယ်လို. မရှိကြဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ပြန်မေးကြည့် မိတယ်။ ငါအလုပ်တွေ
သာများနေတာ အကျိုးရော ရှိရဲ့လားလို.ပေါ့။ တကယ်တော့ အလုပ်တွေ များနေရုံ
နဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး၊ အရေးကြီးတာ အလုပ်များ နေတာထက် ရလဒ်ကောင်း ထွက်ဖို.က အဓိကပဲ မဟုတ်ဘူးလား၊
ကျွန်မကတော့ အလုပ်တွေ လုပ်ရလွန်းလို. စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်ဆို တစ်ခါတစ်ခါ
စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ရလဒ်ကောင်း ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို.လေ။ ဒီအတွေးကတော့ တဖက်သတ်
အလုပ်တွေက များလိုက်တာ၊ အချိန် တွေက နည်း လိုက်တာ
ဆိုပြီး ပြောပြော နေတတ်ကြတယ်။ အချိန် ဆိုတာ(ခဏလေး)
တိုတောင်း တယ် လို. ပြောကြတယ်။ အဲဒီလို ဆိုရင် ဘ၀ဆိုတာလည်း တိုတို လေးပဲပေါ့။ ဘယ်နေ.မှာ
ကျွန်မတို. ဘ၀တွေ ပြီးဆုံး ခြင်းကို ရောက်သွားမယ် ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသက်ရှင်
နေထိုင် ခွင့်ရတဲ့ အချိန်လေးမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ခင်ဖို.လိုတယ်။
ကြင်နာဖို. လိုတယ်။ နားလည်ဖို. လိုတယ်။ ဂရုစိုက်ဖို.
လိုပါတယ်။ ဘ၀တစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေထိုင်ကြ
ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အကျိုးရှိတာကို လုပ်ပေးပြီး၊ သူတို. ကောင်းကျိုး အတွက်
နှလုံး အိမ်ကို ညစ်နွမ်းစေမဲ့ ရန်ညိုးဖွဲတာတွေ၊ မနာလို မုန်းတီး ဖြစ်တာတွေကို
စဉ်းစားမနေပါနဲ့။ မနက်ဖြန် ဆိုတာ ကိုယ့် အတွက်
မရှိ ခဲ့ရင် ဒါတွေ အားလုံဟာ အလကားပါပဲ။ အရေးမကြီး တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေရင် အရေးကြီးတဲ့
ကိစ္စတွေကို အာရုံ မပြု နိုင်တော့ ပါဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွင်မူ.၊ စိတ်ချမ်းသာမူ. အတွက် အရေးပါတဲ့
အချက်တွေကို အမြဲ အာရုံပြုစေချင်ပါတယ်။ အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ ကိုယ့် လုပ်ရပ် ပေါ်မှာမူတည်
ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်တဲ့ သူတွေ နဲ့ အတူ၊ စကားပြောပါ။ ပြုံးပျော်ရွင်စွာ နေထိုင်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ ချစ်သူနဲ့ အတူ အချိန်သုံးပါ။ သူတို. အတွက်လည်း အချိန်ပေးပါ။
ကိုယ့်သားသမီး တွေနဲ့လည်း ဆော့ကစားပါ။ ဘိုးဘွား မိဘ တွေ ဆီကိုလည်း မကြာခဏ အရောက်သွားပါ။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ သဟဇတ ဖြစ်အောင်နေ ပြီး သူတို.ဆီက အတွေးအခေါ် အကြံဥာဏ် လေးတွေကို
မျှဝေခံစားပါ။ ယုံကြည်မူ.တွေ နဲ့ ဘ၀ကို တည်ဆောက်ပါ။ ကိုယ်က ပေးဆပ်ရင် ကိုယ်ဘက် မှာလည်း
အလိုလို ရလာတတ် ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း ပြည့်စုံလာပါတယ်။
အချစ် ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ
ပေါင်းစည်း ညီညွတ်စေပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာဖို.၊ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောဖို.၊ ရာထူး တွေရဖို. ၊ အောင်မြင် ဖို. လုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်မတို. ရင်ထဲမှာ အချစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့
နှလုံးအိမ်လေးထဲ က ချစ်သူတွေကို မေ့မထား သင့်ပါဘူး၊ လစ်လျူရူ မထားသင့်ပါဘူး။ ကျွန်မတို. ရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲက သိပ်ချစ် ရတဲ့ သူတွေ
အတွက် အချိန် ပေးပြီး ဂရုပြု ဆက်ဆံဖို. လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို.ကို တကယ် ချစ်တယ် ဆိုရင်
ကိုယ့် နှလုံးသားထဲမှာ သာ မက ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ထဲမှာ ကိုယ်ချစ် ရတဲ့ သူတွေကို နေရာပေးဖို.
၊ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေနဲ့
လွမ်းခြုံ နိုင်ရင် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံး အချစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီ ချစ်ခြင်း တွေက ဘယ်လောက်ထိ တန်ဖိုးရှိလဲလို.
မေးခဲ့ရင်တော့ မိုးမဆုံး မြေမဆုံး ပါလို. ပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့နော်။
ရွှေမြန်မာ များ အတွက် MandalaySoft ရဲ့ MOC
ဒီကနေ့ ခေတ်ဟာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း Online ခေတ်၊ Internet ခေတ်ပါ။
Online ခေတ်၊ Internet ခေတ် ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် က သတင်းအချက် (Information) တွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် နဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ မျှဝေဖို့(Share) နှင့် ၀န်ဆောင်မှု (Service) ပေးနိုင်ဖို့ပါ။
ဒါကြောင့် ရွှေမန္တလေးရဲ့ MandalaySoft Team ကနေ ပထမဦးဆုံးအနေ နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြင်ပ မှာ ရှိတဲ့ ရွှေမြန်မာ အားလုံး အတွေက် အခမဲ့ အင်တာနက် (Online Sharing & Service) ၀န်ဆောင်မှုလေး တစ်ခု စတင်လိုက်ပါတယ်။
MOC ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က မြန်မာ နိုင်ငံသားများ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့
အဖွဲ့အစည်း လုပ်ရှားမှု (Community), တိုက်ခန်း/အိမ်ခန်း/မြေကွက် ၀ယ်/ရောင်း/အငှား (Apartment / House, Real Estate)၊ ပစ္စည်းအရောင်းအ၀ယ်(Stuff for Sale)၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (Jobs) ၊ ကား/ဆိုင်ကယ် နှင့် အပိုပစ္စည်း အရောင်း အ၀ယ် (Cars / Vehicles / Motorbikes / Parts)၊
ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ အခန်းအနား (Events) များ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် ၀န်ဆောင်မှု (Business Service) များ အတွက် ကြော်ငြာများ (Posted Ad) ကို ပုံများ (Photos)၊ တည်နေရာ (Map)၊ Attachment များ နှင့််အတူ အလွယ်တကူ အင်တာနက် ပေါ်မှာ တင်လို့ရအောင် (Sharing) နှင့် ရှာဖွေ ကြည့် (Searching) လို့ ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ကြော်ငြာတစ်ခု တင်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် Email address တစ်ခု၊ ဆက်သွယ်ဖို့ Contact Number တစ်ခု နှင့် မိမိ ကြော်ငြာ(Share)လို တဲ့ အကြောင်းအရာဘဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန် တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ် အတွင်းမှာ ကြော်ငြာတစ်ခုကို တင်နိုင်ပြီး Facebook နှင့် Google+ တို့မှာ အလွယ်တကူ ကူးယူ(Share) ဖော်ပြနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ကဲ.. အခုပဲ MandalaySoft MOC မှာ ကြော်ငြာ(Share) လိုက်ကြအောင်...
အသုံးပြုသူများရဲ့ စေတနာ ဖြင့် ဝေဖန်မှု၊ ထောက်ပြမှုလေး များ ကိုလည်း MandalaySoft Team မှ ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
MandalaySoft ကို ကြိုက်နှစ်သက် (Support) တဲ့ အနေနဲ့ Facebook မှာ Like လုပ်ပေးကြပါ။
Google+ မှာ Add အပေးကြပါ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြ ကုန်သော ရွှေညီအကို မောင်နှမ အပေါင်းတို.အား လေးစားစွားဖြင့် ဖိတ်ကြား အပ်ပါတယ်ရှင်.။ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ.၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ တိုပါးရိုး မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် မြန်မာ အတာ သင်္ကြန်ပွဲတော် ကို ကျင်းပ ပြုလုပ် မည်ဖြစ် ပါသည်။ အတာ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို လာရောက် ဆင်နွဲကြမည့် စင်္ကာပူရောက် ရွှေညီအကို မောင်နှမများ အား ပိတောက်ရွှေဝါ မဏ္ဍပ် သို. လာရောက်ပြီး အဆာပြေ မုန်းဟင်းခါး သုံးဆောင်ကြ ပါလိ်ု. ပိတောက်ရွှေဝါ မိသားစု က ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်ရှင်။ "ဒီသင်္ကြန်ရက်လေးမှာ ရယ်စရာနဲ့ စားစရာ ပျော်ပျော်ပါးပါး အားပေးလိုက် ကြစို. ၊..လာပါ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ""စေတနာနဲ့ ကျွေးတာ၊ ခင်မင်ရင်တော့ စားပါ။ ""ကံထူးတဲ့ တစ်ယောက်တော့ ထိမယ် ကြည်စယ်တဲ့ ငရုပ်သီး။"ရွှေ မေတ္တာများ ဖြင့် ပိတောက်ရွှေဝါ မိသားစု။ ဆက်ဖတ်ရန်>>>
နေ၀င်ခါနီး အေးချမ်းပါစေ။ မေစိုး-ရွှေမန္တလေး-(Shade Weekly Journal) အတွဲ၆။ အမှတ်(၁၀)
မြန်မာပြည်က ကျွန်မ အမ ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက် စင်္ကာပူကို အလည်လာခဲ့ပါတယ်။ အလုပ် နားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေမှာ စင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ လည်စရာ ပတ်စရာ နေရာလေးတွေကို လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်တောင် တစ်ချို့နေရာ တွေကို ပြည့်စုံအောင် မရောက်ဘူး ပါဘူး။ တကယ် လည်မယ် ဆိုရင် စင်္ကာပူ မြို့က တပတ်လောက်နဲ့ တော်တော် နှံတယ်လို့တောင် ပြောလို. ရပါတယ်။ကျွန်မ အမက တော့ မြန်မာပြည် ကရောက်ခါစ ဆိုတော့ အံသြတစ်ကြီးနဲ့ အသစ်အဆန်း ဖြစ်လို. နေလေရဲ့။ စင်္ကာပူက နေလို. ကောင်းလိုက် တာတဲ့လေ။ ခြင်မကိုက်တာ၊ လေရူ ရတာ သန်.ရှင်းတာ၊ လူသွားလမ်း အတွက် အဆင်ပြေစွာ လမ်းလျောက်လို.ရတာ လမ်းဘေးမှာ အမိုက်မရှိဘဲ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တာ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းတာ၊ လမ်းဘေးမှာ အမိူက် မရှိတာ၊ လျှပ်စစ်မီး ခလုပ်ဖွင့်တိုင်း လင်းတာ၊ ဘစ်ကားတွေ၊ မြို့ပတ် ရထားတွေ အချိန်မှန် နေတာတွေကို သဘောကျလို့ မဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့။ တကယ်တော့လည်း ဒါတွေဟာအဆန်းမှ မဟုတ်ပဲလေ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မှာတော့ ဘယ်ကိုပဲ သွားသွား MRT(Mass Rapid Transit System) လို့ ခေါ် တဲ့ အမြန်ရထား ကို အသုံးပြုပြီး သွားကြ လာကြတာ များပါတယ်။ MRT Station အနီးနားမှာပဲ (Food Court) လို့ခေါ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ Shopping centerတွေရှိပါတယ်။ နေ၀င်မိုးချုပ် အလုပ်လုပ်ကြရတော့ ချက်ဖို.ပြုတ်ဖို. အချိန် သိပ်မပေး နိုင်ကြ ပါဘူး။ များသော အားဖြင့် (Food Court ) တွေမှာပဲ စားကြ တာများပါတယ်။ ကိုယ့် ဧည့်သည် လာခဲ့ရင် တောင် အိမ်မှာ ချက်ကျွေးတာထက် အပြင်မှာ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေး ကြတာများပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ အမကို နေ့လည်စာကျွေးဘို့ MRT Station ကနေ စားသောက်ဆိုင် ရှိရာကို နှစ်ယောက်သား လမ်းလျောက်လာခဲ့ ကြပါတယ်။ တနေရာ အရောက်မှာတော့ တစ်စုံတစ်ခု ကို ကိုင်ထားတဲ့ တုန်ချိချိ အဘွားအို တစ်ယောက်ရဲ့ လက်အစုံဟာ ကျွန်မတို့ရှေ့ ကို မထင်မှတ်ပဲ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်မသေချာ ကြည့်မိတော့ ငွေရောင်သမ်း နေတဲ့ ဆံပင်၊ ဖျော့တော့နေတဲ့ မျက်လုံး အစုံ၊ အရိုးပေါ် အရည်တင်ရုံလေးရှိတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေးနဲ့ ကုန်းနေတဲ့ ခါးလေး ကိုထိန်းပြီး ရပ်နေရင်း တစ်ရူး ထုတ်ရောင်း နေတဲ့ အမေအို တစ်ယောက် ။ တစ်ရူး တစ်ထုတ်ကို စင်္ကာပူငွေ ပြားသုံးဆယ်၊ သုံးထုတ်ယူ တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်း နေလေရဲ့။ ကျွန်မ အမေအိုကို မြင်လိုက်မှ အော် ငါ ထွက်လာတာ တစ်ရူးမပါ ပါလားလို့ သတိထား မိလိုက်ပါတယ်။ အမေအို ထံမှလည်း တစ်ရူး သုံးထုတ်ကို လှမ်းဝယ်လိုက် မိပါတယ်။ ကျွန်မ အမက ညည်းကအေ ပိုက်ဆံ တော်တော် ဖြုန်းပါလား ၊ တစ်ရူးများ တစ်ဒေါ်လာပေး ၀ယ်ရတယ်လို.၊ အခု စားသောက်ဆိုင် သွားမှာ မဟုတ်လား၊ အဲဒီမှာ တစ်ရူး ရှိမှာပေါ့တဲ့။ ကျွန်မ အမကို ဘာမှ ပြန်မပြောပဲနဲ့ နှစ်ယောက်သား Food Court ရှိရာ ကို ဦးတည် ထွက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ Food Court ဆိုတာကတော့ ခန်းမ ကြီးတစ်ခုတည်းမှာ အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ခေါက်ဆွဲ ဆိုင် ကြက်ဆီထမင်း ဆိုင်၊ တရုပ် အစားအစာဆိုင်၊ မလေး အစားအစာ ဆိုင်၊ ဂျပန် အစားအစာဆိုင်၊ အနောက်တိုင်း အစားအစာဆိုင်၊ အအေးဆိုင် ကော်ဖီဆိုင် ၊ အသီး ဆိုင် စတဲ့ အစားအစာ ဆိုင်တွေကို ကောင်တာ လေးတွေ ခွဲပြီး တစ်ဆိုင်ဆီ ရောင်းကြတာပါ။စားသောက်တဲ့ နေရာကတော့ (Common Dinning area) မှာ စားပွဲ ကုလားထိုင်တွေ ချထားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ထားပါတယ်။ ဘယ်ဆိုင်က ပဲ ၀ယ်စား ၀ယ်စား ဒီ စားသောက်ခန်းမ ကြီးထဲမှာပဲ လွတ်တဲ့ စားပွဲ၊ လွတ်တဲ့ ကုလားထိုင်ကို ၀င်ထိုင်ပြီး စားသောက် ကြရပါတယ်။ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေ.ရင် အဲဒီအစားအသောက်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာရှေ.မှာ တန်းဆီရပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်တာနဲ့ စားချင်တာ မှာပြီး ငွေချေရပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာက လူမျိုးစုံ ရှိတော့ အစား အသောက်လည်း မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအစာကို ရောင်းတဲ့သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ လူမျိုးခြားမို. ၊ ဘာသာစကား မတူလို. နားမလည် နိုင်ပဲ ဖြစ်နေပြီး Communicate လုပ်လို.မရရင် အစား အသောက်မှာ ဓတ်ပုံလေးတွေ ဖော်ပြထားတယ်။ ဓတ်ပုံမှာ နံပါတ်လေးတွေ တပ်ထားတယ်။ နံပါတ် လေးပြောပြီး မှာလို.ရပါတယ်။ ကိုယ်စားမဲ့ အစား အစာကို ကိုယ်တိုင် ယူရပါတယ်။ ဆိုင်တိုင်းမှာ ဗန်းလေးတွေ ချထားပါတယ်။ ဗန်းထဲမှာ အစားအသောက်တွေ ထည့်ယူလာပြီး လွတ်နေတဲ့ စားပွဲကိုလိုက်ရှာရပါတယ်။ သောကြာနေ. ညနေပိုင်းနဲ့ စနေနေ.တွေ ဆို စားသောက်သူ တွေ အရမ်းများ တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ထိုင်ခုံနေရာ ၊ စားပွဲနေရာ လွတ်မရှိခဲ့ရင် ဗန်းကလေးကို ကိုင်ပြီး ၊ စားသောက်လို. ပြီးခါနီး ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ စားပွဲနားကို သွားပြီး ခဏစောင့် ရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ခုံနေရာ ရတာနဲ့ စားသောက်ပြီး ထသွားရုံပါပဲ။ Food Court ထဲရောက်မှ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သိသွားပြီး ကျွန်မ ကို အသုံးအဖြုန်း ကြီးတယ်လို. အပြစ်တင်စော တဲ့ ကျွန်မ အမက ခုတော့ တခြားဘက်ကို မြှားဦးက လှည့်သွားပါ တော့တယ်။ “တို.မြန်မာပြည် က စားသောက်ဆိုင် တွေမှာဆို တစ်ရူးလည်း စားပွဲပေါ်မှာ ကြိုက်သလောက်သုံး၊ တစ်ချို. ဆိုင်တွေဆို လက်ဖက်ခြောက် ခတ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းကို ခယားလိုက်တောင် အလကား တည်ခင်းပေး ထား သေးတယ်” ဒီမှာတော့ ရေနွေးကြမ်း လေး သောက်ချင် တာတောင် တခွက် ပြား ခြောက်ဆယ် ပေးပြီး ၀ယ်သောက် ရတယ်။ ဆိုပြီး ရေနွေးကြမ်း ဘက်လှည့်သွား ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်မ အမ ပြောလည်း ပြောစရာ ဒီမှာက ဘယ်အရာမှ အလကား ဆိုတာ မရှိဘဲကိုး။ နောက်တဖန် သူ.မျက်စိရှေ. မှာ လူငယ်တွေ စားသောက်ပြီး ထားသွားကြတဲ့ ပေကျံနေတဲ့ ပုံဂံတွေ၊ ခွက်တွေကို တွန်းလှည်းလေး ပေါ်တင်ပြီး ကောက်သိမ်း နေတဲ့ တုန်တုန်ချိချိ၊ ခါးကုံးကုံး ၊ အဖွား အိုကို မြင်ပြန်တော့၊ စင်္ကာပူ ကလည်း သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ တောင် ရုန်းကန် လူပ်ရှားနေရတာပဲနော်တဲ့။ သူတို.ကြည့်ရတာလည်း အဖော်မဲ့ အထီးကျန်သလိုပဲတဲ့။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မ အမ ပြောတဲ့ စကားကို မထောက်ခံ ပဲမနေနိုင်ပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာက အိမ်ရှိလူကုန် နေ၀င် မိုးချုပ် အလုပ်လုပ် ကြတော့ ဘိုးဘွားမိဘ တွေကို တစ်ချို.က အချိန်ပေးပြီး မစောင့်ရှောက် နိုင်ကြဘူးပေ့ါ။ ဒါကြောင့် Home for aged တွေမှာက အစစ အရာရာ စိတ်ချရတယ်။ တစ်ချို. ကတော့လည်း သားသမီး တွေက ချမ်းသာ ကြွယ်ဝပါရက်နဲ့ အရွယ်အိုရင် သီးခြားနေရမယ် လို.များ ရှိနေလို.လား တော့မသိ ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သွားပြီး Nursing home တွေမှာနေကြတယ်။ အဲဒီအတွက် မကျေမနပ်လည်း မဖြစ်ကြပါဘူး။ သားသမီးတွေ ကိုလည်း မကဲ့ရဲ့ ကြဘူး၊ မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ ဘိုးဘွား ရိပ်သာ နေရာမျိုး ပေါ့။ တစ်ချို. ကျတော့လည်း အသက်အရွယ် အိုမင်းမေပဲ့ သားထောက် သမီးခံ ရှိလင့် ကစား ၊ ကိုယ့်အရိုး ကိုယ် သယ်နိုင် သေးသမျှ အလုပ် လုပ် နေတဲ့ သက်ကြီးရွယ် အိုတွေကို တွေ.ရတတ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို ဆိုမှတော့ အလုပ်နေရာတိုင်း ၀င်လုပ်လို. မရနိုင်တာ လေးတွေ ရှိတာပေါ့။ ဒါကြောင့် Food Court တွေမှာ စားသောက်ပြီး ထားခဲ့တဲ့ ပုံဂံတွေကို လိုက်လံ သိမ်းဆည်း တဲ့ အလုပ်တို.၊ MRT Station နားက အများသုံး အိမ်သာတွေနဲ့ ကုန်တိုက်(Shopping Centre) တွေမှာ ရှိတဲ့ အများ ပြည်သူသုံး အိမ်သာ တွေ မှာ သန်.ရှင်းရေး အလုပ် တို.ကို၊ တုန်တုန်ချိချိ၊ ခါးကုံးကုံး ၊ တလူပ် လူပ်၊ တရွှေ.ရွေ. နဲ့ အလုပ်လုပ် နေသေးတဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အိုတစ်ချို.ကို တွေ.ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အမကတော့ ဒီမြင်ကွင်းကို မြင်ပြီး “တို.အမေ၊ တို. အဖွား အရွယ်တွေ တို.ကြီးမေတွေ အရွယ်ပဲနော် အလုပ်လုပ်နေကြတာ ကြည့်စမ်း တဲ့လေ။” ကျွန်မ အမ ပြောလိုက် တဲ့ စကားလေးဟာ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ဆို.နင့်လို. သွားပါတယ်။ ကျွန်မ အမေ နဲ့ ထပ်တူပြုမိပြီး ကျွန်မအမေ သာဆိုရင်ဆိုတဲ့ အတွေး၊ ပြီးတော့ ကျွန်မသာ အဲဒီနေရာ မှာဆိုရင်လို. တွေးမိ လိုက်တိုင်း ဒီနိုင်ငံက သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ချို.ရဲ့ အထီးကျန်စွာ ရုန်းကန် နေရတဲ့ ဘ၀ကို တွေ့ တိုင်း၊ မြင်တိုင်း၊ အဝေးက ကျွန်မ မေမေ ကိုလည်း သတိရ မိပါတယ်။ အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ ကျွန်မ ဘ၀ရဲ့ အိုမင်းလာတဲ့ အချိန်ကို လည်း တွေးကြောက်မိပါတယ်။ ဒီအတွေး တွေ နဲ့ အတူ ကျွန်မ အမေဆီ ဖုံးဆက် မိပါတယ် ။ ကျွန်မ အမေ့ကို သတိရမိတယ်။ စိတ်ပူမိပါတယ် ။ ကျွန်မအမေ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ မသိဘူးပေါ့ ။ အမေ နေကောင်းရဲ့လား.. လို့ ဖုံးဆက်တော့မှ အမေ အသံက ကြည်ကြည်လင်လင် အမေ နေကောင်းပါတယ်။ နံနက် တိုင်း ဘုရားပန်းလဲ ဆွမ်းတော်ကပ်နဲ့ ဘုရား ဝေယျာဝစ္စ တွေ အမေနေ.စဉ်လုပ်တ်ာတဲ့။ ဘုန်းကြီး သံဃာတော်တွေ အတွက် မနက်တိုင်း ဆွမ်းလောင်း တာတော့ အမေ မပျက်ဘူး တဲ့လေ။ ပြီးတာနဲ့ အမေ့မြေးလေး နဲ့အတူ အမေနေပြီး မြေးကျောင်း သွားတဲ့ အခါတော့ အမေ ပုတီးကိုင်ပြီး ဂုဏ်တော်လေး ပွားလိုက ပွား နေလိုက် တယ်တဲ့။ နေ့လည်နေခင်း တစ်ကြိမ် လောက်တော့ တရားထိုင် ဖြစ်တယ်တဲ့လေ။ အမေကတော့ အမေ့သမီး (ကျွန်မ ညီမ အငယ်ဆုံးရဲ့) မိသားစုနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး အတူတကွ နေရလို့ အမေ စိတ်ချမ်းသာ ပါတယ် တဲ့။ ကျွန်မကို သာ ကိုယ့်ကိုယ့် ကိုယ့် ဂရုစိုက်ဘို့နဲ့ ရတနာသုံးပါး မမေ့ဘို့နဲ့ မိဘဆွေမျိုး တွေနဲ့ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာကောင်း သမားကောင်း တွေကို ဆည်းကပ်ဘို့ အမေ အကြိမ်ကြိမ် မှာနေလေရဲ့ ။ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာလည်း ငွေရဖို့ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းတွေကို အကျိုးပြုဘို့၊ ပါရမီဖြည့်ဘို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေပါမှ လေးနက်မယ် ဆိုတာကို လည်း ဖုံးဆက်တိုင်း သတိပေးပါတယ်။ကျွန်မ အမေ အတွက်ကတော့ အထီးကျန် ဆန်ခြင်းလည်း မရှိလှ၊ မိသားစုနဲ့ မြေးနဲ့ သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်းလေး ရှိလို. တာကြားရတော့ ကျွန်မ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မဟာ မိသားစု ထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ခုထိ ကျွန်မဘ၀ အတွက်ပဲ ရုန်းကန် နေပြီး ကျွန်မ အမေအတွက် မကြည့်ရှု မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ ကျွန်မ အမေ့ ကိုပစ်ပြီး တ၀မ်းတခါး လှဖို. အမေနဲ့ အဝေးကြီးကို ထွက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ အမေ ကျန်းမာရေး ကတော့ ခုချိန်ကောင်းနေ လို့တော်သေး ပါသေးတယ်။ ဒီယူဆချက်ဟာ အကြောင်းပြချက်လေး တစ်ခုမျှပါပဲ ။ မိဘဆိုတာ မသေခင် လုပ်ကျွေးပြုစုမှ၊ သေပြီးမှ လုပ်ကျွေးပြုစုချင်တယ် ဆိုလို့ကတော့ အချီးအနှီးပဲလေ။ လုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတာ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ရုံနဲ့ တာဝန် ကျေရောလား ဆိုတွေးမိရင် တကယ်တော့ မလုံလောက် ပါဘူးလေ။ ရုပ်ပိုင်း ပစ္စည်းပိုင်းက ထောက်ပံရုံတင် မကပဲ ကိုယ့်မိဘကို စိတ်ကျေနပ်မူ့ ရအောင် စိတ်ချမ်းသာအောင် နားလည်မူ့ပေးပြီး မိဘရဲ့ အဆုံးအမ ကိုနာခံပြီး ပြန်ပြီး ပြုစုရတာဟာ ကျေနပ် စရာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။လူတွေက တဖြည်းဖြည်း၊ တရွှေ.ရွှေ.နဲ့ အိုခြင်း ဆီကို သွားနေလေရဲ့ ။ကျွန်မလည်း လူ့ဘောင်လောကမှာ လူ့တာဝန်တွေထမ်းရင်း တစ်ချိန်ချိန် အမေလိုအရွယ် အမေ့လိုနေရာမှာ ရောက်ရ မှာပဲလေ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ကျွန်မ အမေလို နေနိုင်ပါ့မည်လား။ ကျွန်မ အခု အရွယ်မှာ တော့ အမိမြေက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာလေးနဲ့ သန်တုံး၊ မြန်တုံး၊ ဖျတ်တုံး၊ လတ်တုံး၊ အရွယ်မို.သာ ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ် နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ တကယ်လို့ ကျွန်မ အမေ့လို အရွယ်ရောက်ရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်မကို ဘယ်သူက နေရာပေးမည်နည်း၊ ကျွန်မ ဘယ်နေရာမျိုးမှာ အလုပ်လုပ် နိုင်ဦးမည်နည်း။ ကျွန်မခန္ဓာဝန်ကို မနိုင်တစ်နိုင် ထမ်းရင်း တရွှေ့ရွှေ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အဖွားအိုဟာ ကျွန်မဆိုရင်၊ ရောဂါဘယနဲ့ အထီးကျန်တဲ့ ကျွန်မ နောက်ဆုံးအချိန် နေ၀င်ခါနီးမှာ ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြတ်သန်း ရင်ဆိုင်ရမည်နည်း။ ကျွန်မ သားသမီး ပင်ရှိလင့်ကစား သားတွေ သမီးတွေ အနေနဲ့လည်း အသက်ကြီး လာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ခံစားမှု. တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ဖြည့်ဆည်း အချိန်ပေး နိုင်ပါဦး မည်လား။ သူတို.ခေတ် ရောက်တော့ ကိုယ့်ထက်တောင် အလုပ် ပိုလုပ်နေရမဲ့ အခြေအနေ မျိုများဖြစ်နေမလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် နေ၀င်ခါနီး နောက်ဆုံး အလင်းရောင် လေးမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော် တွေကို နှလုံးသွင်းနိုင်ပါဦး မည်လား ။ ကျွန်မ ဘ၀ မောဟနဲ့ နိဂုံးချုပ် တော့မှာလားလို့ တောင် တွေးပြီး ကြောက်လာ မိပါတယ်။ တကယ်တော့ တစ်စ တစ်စနဲ့ သေချာ ပြန်တွေးမိရင် သေခြင်းတရား ဆိုတာ အရွယ် မရွေးဘူးလေ ။ အိုမှ သေနိုင်တာမှ မဟုတ်တာပဲ လေ။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာ ကျင်လည် ရတာတွေလည်း များခဲ့ပြီပေ့ါ။ ဘ၀ နေ၀င် ခါနီး အချိန် ကလေးမှာတော့ အေးချမ်းစွာ နေသွား ချင်ပါတယ်။နေ၀င်ခါနီး ကျွန်မရဲ့ ဆည်းဆာ အိပ်မက်လေး တစ်ခုကတော့ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အထီးကျန် စွာနေ ထိုင်ရတယ်ပဲ ထားဦး၊ လောကကြီး ထဲကို လာတုန်းကလည်း တစ်ယောက်ပါပဲ ၊ ပြန်သွားရတော့မယ် ဆိုရင် လည်း တစ်ယောက်ထဲပါပဲ။ သို.ပေမဲ့ မပြန်ခင်(မသေခင်) အချိန်ကလေးမှာ အိုတဲ့ဘေး၊ နာတဲ့ဘေး တွေကို ကျော်လွှားဘို့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးလားလို့ တွေးမိပြီး ကိုးကွယ် အားထားစရာ ဘုရား၊တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါးနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော် ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည် လေးမှာပဲ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော် တွေကို နှလုံးသွင်းပြီး ကျွန်မ ဘ၀ နေ၀င်ခါနီး အေးချမ်း သွားချင်ပါတယ်။မေတ္တာဖြင့်မေစိုး (Shwe Mandalay) မန်းတောင်ရိပ် အနုပညာဂျာနယ်အတွဲ (၆) အမှတ်(၁၀) ဤဆောင်းပါးလေးကို ကျေးဇူးရှင် ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ - ဇယ မင်္ဂလာ ဗုဒ္ဓဝိဟာရ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်း (စင်္ကာနိုင်ငံ) (Clementi-ကလမဲတီ) ကျောင်း တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာဘို.ဘွား မိဘများ ကန်တော့ ပွဲ အတွက် ဓမ္မဒါန အမှတ်တရ အဖြစ် ရေးသားပြုစုပါ၏။ ဆက်ဖတ်ရန်>>>
တရားတော်များ နာယူ နိုင်ပါသည်။
ဓမ္မ Video /TV
ငါတို.ဖြစ်ရ၊ ဤလောက၀ယ်၊ ဘ၀သမိုင်း၊ မရိုင်းစေရန်၊ စိတ်မာန်မချ၊ မာနမပါ၊ ဒို.စွမ်းရာဖြင့်၊ ဒို.သာသနာ၊ ဒို.ပြည်ရွာကို၊သာယာစေမူ.၊ လုံလ္လပြုအံ့။
သူများ ပါးစပ်လှုပ်တိုင်း၊ ကိုယ့်စိတ်က လှုပ်ရှားရမယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ သူများပါးစပ်မှာ လမ်းဆုံးသွားမယ်။
Dhamma TV Channel DhammaTV Myanmar Monk
121casino, Casino online, ONLINE CASINO, Flagcounter, ONLINE CASINO BLACKLIST
United States Calendar သီချင်းနားဆင်ရန်
မိဖုရား ဖြစ်ချင်သော ကျွန်မ သူငယ်ချင်း သို./(မေစိုး...
ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက် ။
ကျွန်မသည်စာရေးတတ်သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။စာပေချစ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လို. စာရေး တာလေးကို ၀ါသနာ အရ Blog တစ်ခု လုပ်ပြီးရေး ဖြစ်ခဲ့သလို၊ မန္တလေးကို ချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ မန္တလေးနဲ့ ဒေသစွဲ ရောဂါ ကိုတော့ ဘယ်ဆေးနဲ့ ကုလို့မှ ပျောက်မှာ မဟုတ်လို့ ဆောင်းပါး လေး တွေ ကိုယ်ပိုင် ရေးသားပြီး ကျွန်မ ချစ်သော ရွှေမန္တလေး အမည်နဲ့ blog လုပ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ blog ကတော့ 23.02.2010 မှာ စပြီးPost လုပ်ပါတယ်။ ကျမ ချစ်သော ရွှေ မန္တလေးမှ ရေးသား ဖော်ပြ ထားသည့် ဆောင်းပါး များကို ကူးယူ ဖော်ပြ လိုပါလျှင် ရွှေ မန္တလေးမှ ကူးယူ ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မူရင်း စာရေး ဆရာ၏ အမည်နှင့် blog အမည် ကိုထည့်သွင်း ဖော်ပြပြီး blog တွင် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း၊ အီးမေလ်နှင့် ဖြန်.ဝေခြင်း ပြုလုပ် နိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေး အပ်ပါသည်ရှင့်။ကျွန်မ ချစ်သော ရွှေမန္တလေး ။
Comment For Visitors